प्याज लुकाउने बल्खु तरकारी बजारको एस के. सप्लायर्स र चुली सगरमाथा टे्रर्डस प्रहरीको जिम्मामा « Pen Nepal
Published On : 16 September, 2020 1:58 pm By : पेननेपाल
बुधबार बिहान करीब साढे ६ बजे महानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका पदाधिकारी अनुगमनका लागि एस. के. सप्लायर्समा पुगेर प्याजको भाउ सोधे । व्यापारीले बिक्रीका लागि प्याज नभएको बताए । भारतबाट प्याज आयात रोकियो । बेच्न छैन । उनीहरु भन्दै थिए । व्यापारी सुनाउँदै थिए । हिजो हामीले होलसेलमा १०० रुपैयाँ र खुद्रामा ११० रुपैयाँमा प्याज बिक्री गरेका थियौं ।
अनुगमनका क्रममा बजारकै नदीतर्फको भागमा सञ्चालित मिट मार्टको छेउमा करीब २०० बोरा प्याज भण्डार गरिएको भेटियो । शुरुवात्मा सामानको स्वामित्व कसैले लिएनन् । पछि सुनिल के. सी. को सामान भएको जानकारी भयो । सोधखोज गर्दै जाँदा थाहा भयो । उनले चुली सगरमाथा टे«डर्स नामको होलसेलबाट यी सामान भण्डार गरेका रहेछन् । उता प्याज छैन भनिएको एस. के. टे«डर्स पनि उनर्कै नाममा दर्ता भएको फर्म रहेछ । दुवै फर्मका सञ्चालक एकै व्यक्ति भएको कागजपत्र भेट्टाएपछि थाहा भयो
उनले खुदा्र व्यापार गर्न एस. के. ट्रेडर्स र होलसेल व्यापारका लागि चुली सगरमाथा दर्ता गरेका रहेछन् । उनले हिजो ११० मा खुद्रा पसलबाट बिक्री गरेको भन्ेको प्याज भदौ ३० गतेको बिलमा ६८ रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए । बजारमा प्याज नभएको मौका पारेर भएको प्याज पनि नबेचेको, आफ्नै होलसेलबाट ६८ रुपैयाँमा खरिद गरेको प्याज खुद्राबाट ११० मा बेचेको एकिन भएपछि उनलाई स्थानीय प्रहरी, बजारका व्यवस्थापकको रोहवरमा मुचुल्का तयार पारेर प्रहरीलाई बुझाइएको हो । यस क्रममा के. सी. भन्दै थिए । गल्ती हो । तर एक्लैले कानुन पालना गर्छु भन्दा ग्राहकबिनाको एक्लो व्यापारी होइन्छ । मैले व्यवहारिक रुपमा यसो गरिन भने कसरी बचिन्छ र?
त्यसपछि अनुगमन समिति प्याज आयात मूल्यको जाँच गर्न कलंकीबाट थानकोट जाने सडक खण्ड ढुङ्गे अड्डा पुग्यो । करीब ४५ मिनेट त्यहाँ रहँदा प्याज बोकेका कुनै पनि ढुवानीका साधन भेटिएनन् । त्यसपछि टोली कालीमाटी तरकारी बजार आयो । बजारले आज प्याजको भाउ ११७ देखि १२० सम्म भएको सूची सार्वजनिक गरेको छ । यो सूची देखाएर व्यापारीहरु कालीमाटीले बेच्न पाउने हामीले किन नपाउने भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । व्यापारीको यो आवाज समितिले कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार बिकास समितिका कार्यकारी निर्देशक बिनोदकुमार भट्टराई सुनायो । यसको उत्तरमा भट्टराईले भने यो मूल्य निर्धारण होइन । बजारमा आज भएको किनबेचको अवस्था हो । यसलाई हामीले सार्वजनिक गरिदिएका हौं । यो सूचनका आधारमा सरोकारवालाले अनुगमन र नियमन गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
बजारमा देखिएको यो अव्यवस्थालाई पूर्ण निगरानी गर्छौ । अनुगमनपछिको प्रतिक्रियामा समितिकी संयोजक एवं महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले भनिन् आयातमा कम भएको हुन सक्छ तर त्यही निहुँमा बजारमा भाउ बढ्ने अवस्था होइन । मौकाको फाइदा उठाउनेहरुमाथि हाम्रो निगरानी निरन्तर रहन्छ । अनुगमनमा क्रममा खाद्यबस्तुमा दाल, चामल, गेडागुडी, पानीसहित पेय बस्तु, तरकारी र फलफुलको गुणस्तर, मूल्य र बजार सहजताको अवस्था हेरिरहका छौं । कृषि बिभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारी भन्छन् ठाउँठाउँमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
आजको अनगुमनमा महानगरको पशु सेवा बिभाग र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण बिभागका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
काठमाडौं । यो आर्थिक वर्षभित्र एक हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप्ने सरकारको योजना
एनएमबिको निक्षेप लोभ्याउने ब्याज, बचतमा ५.१ प्रतिशतसम्म र मुद्दतीमा ८.१ प्रतिशतसम्म
काठमाडौं । हाल बैंकहरुमा निक्षेप थुप्रिरहेको र साना निक्षेपकर्तालाई बचतमा न्युन ब्याज प्राप्त भई लगानीको